Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-abawanye na St. Vincent
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-abawanye na St. Vincent
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Saint Vincent na Grenadines na -agbasa akụkọ • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ulo oru kachasi elu nke uwa nile, Sandals Resorts International, na-eme njem na ebe ohuru Caribbean. Sandals Resorts International kwupụtara taa na ọ ga-agbasawanye pọtụfoliyo osimiri ya dị na St. Vincent na Grenadines, agwaetiti nke asatọ ya na Caribbean, na ebe ọhụụ ọhụrụ maka akara a, na-agbaso inweta Buccament Bay Spa na Resort. A ga-agbanwe ebe ezumike a ka ọ bụrụ Ebe ntụrụndụ osimiri nke anọ maka akara ahụ, na-esonye na ezinụlọ ha na-emeri emeri ntụrụndụ na Jamaica na Ndị Turks & Caicos.
Dabere na Onye guzobere Sandals Resorts International na Onye isi oche, Hon. Gordon “Butch” Stewart: “Itinye ego na St. Vincent na ndị mmadụ na-adọrọ mmasị, abụghị naanị na-akpali akpali, mana ọ bụ usoro ebumpụta ụwa maka ịga n'ihu na-agbasa n'ime Ọwụwa Anyanwụ Caribbean. Malite na ntinye mbụ anyị na Saint Lucia ọtụtụ afọ gara aga na n'oge na-adịbeghị anya Grenada na Barbados, anyị bụ ndị mmeri nke uto maka Eastern Caribbean, ọ ka nọ na-ebute ụzọ maka usoro mgbasa anyị. Gbasa n'ime ohuru-ebe ọhụrụ ushers na ezigbo ohere ọhụrụ na ẹdude otu òtù na-enweta a dum ọhụrụ ụzọ ndụ na ọkachamara ibu ụzọ. Oge nke ndị ahịa anyị rutere na St.Vincent, ha ga-ama mma ya. Ebe ezumike a makụrụ Oke Osimiri Caribbean, ọ dịkwa n'ime ugwu ugwu na oke ohia gbara ya gburugburu. Nke kasị nke, ọ bụ naanị obere ụgbọala ga-esi na ọdụ ụgbọ elu Argyle International nke ewuru ọhụrụ. ”
Nkwekọrịta ahụ, nke nọworo na-arụ ọrụ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, ga-eweta Osimiri Resorts gaa n'agwaetiti nke a maara dị ka 'ọla nke Caribbean.' Adam Stewart, osote onye isi oche nke Sandals Resorts International kwuru, sị, "Ebe ezumike a ga-enwetacha nnukwu mmeghari na mmezigharị ya." “Oge ọ bụla anyị gbasaa, anyị na-eji ohere zuru oke nke afọ iri anọ anyị nwere ele ọbịa na -emepụta ọrụ na nkà ọhụụ ọhụụ site na Mahadum Corporate anyị, ọrụ dị n’elu ala nke Sandals Foundation anyị, ntinye ụgbọ elu anyị raara onwe ya nye na ụwa niile mgbasa ozi ahịa nke na-eso mgbe niile. Ka anyị na-elepụ anya n'ihu, uto a na-egosi ohere dị ukwuu. ”
Nkwuputa ụlọ ọrụ ahụ abụghị naanị ihe mgbaàmà nke ihe ga-abịa, kama ọ bụ ihe ncheta maka njem na njem njem ụwa na ọdịnihu nke njem ndị njem Caribbean na-egbuke egbuke. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ nke ihe ịga nke ọma n'ime ụlọ ọrụ niile, Sandals Resorts International ga-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe ma na-enye 40-Star Luxury Included experience ahụmahụ ezumike onye ọ bụla hụrụ n'anya.
Ozi ndị ọzọ banyere akpụkpọ ụkwụ.